Ibhetri ukuzama, Isilungisi somyezo, Ukutsala umphumo-FEIHU
Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd.ngumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela ngaphandle elibandakanya uyilo, i-R & D, imveliso kunye nentengiso yezixhobo ze-lithium ezintsha. Itekhnoloji yeFiihu inezityalo zale mihla, imveliso yokuqala kunye neklasi yokuvavanya, egubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-30,000, indawo yokwakha yeemitha ezili-20,000. Okwangoku, kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-400, kubandakanya iitalente eziphezulu zobungcali, umbutho onamandla kunye neqela lezentengiso.
Yintoni oyaziyo malunga ne-Electric Drill
Umbhobho wombane ngumatshini wokugrumba osebenzisa umbane njengamandla. Yimveliso eqhelekileyo kwizixhobo zamandla kwaye eyona nto ifunwayo kwimveliso yezixhobo zamandla. Ezona nkcukacha ziphambili zoqheliso lombane zii-4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, njl.
Ngokunyuka kobunini bemoto, ixabiso lokuhlamba iimoto nalo lenyukile. Uninzi lwabanini bemoto abaselula bayitshintshile imbono yabo ukuze bakhethe ukuhlamba okungabizi mali ininzi, okukhawulezayo, okufanelekileyo, kunye nokusingqongileyo. Xa uhlamba imoto ekhaya, kuyimfuneko ukuba nemoto yokuhlamba amanzi ...
Amandla ombane ahlala esetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla. Xa sifuna ukubhola imingxunya okanye ukufaka izikrufu ekhaya, kufuneka sisebenzise izixhobo zokomba amandla. Kukho umahluko phakathi kombane. Eziqhelekileyo ziyi-12 volts kunye ne-16.8 volts. Ke yintoni umahluko phakathi kwezi zimbini? Yintoni umahluko ...
Nge-Agasti ka-2020, inkampani yethu yavelisa iimodeli ezintsha zelithium ……
Nge-Agasti ka-2020, inkampani yethu iphuhlise iimodeli ezintsha zezixhobo zamandla ebhetri ye-lithium, imipu yamanzi yebhetri kunye ne-lithium yebhetri yokucheba igadi, kwaye yadlulisa isatifikethi se-GS, ivule indlela yokungena okulandelayo kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Iimveliso zigubungela i-12V eyaziwayo ngoku ...